Ukwenza ucansi unezinkinga kuyalwehlisa ulaka nokhwantakala
UGOTI wezempilo nezobudlelwane uDkt Vuyolwethu Olona Madikane Isithombe: Facebook
KUYINTO ejwayelekile nevamise ukususa umsindo kwizithandani ukukhala ngokuncishwa ucansi nokugcina kuholela ekutheni omunye ajole eceleni noma ashiye kulobo budlelwane.
Ziningi izinto eziholela ekutheni izithandani zigcine zingasathintani noma ziye ocansini, ukuhlala ngokuxabana ngenye yezinto ezisusa umsindo. Ingxabano ongoti bezempilo bathi yiyona kanye eshisisa inkonzo yasekamelweni yehlise nolaka kwisithandwa sakho.
Ongoti bathi kunama hormones abalulekile nakugcina ujabule njenge Dopamine, Serotonin ne-Oxytocin. Lama hormones womathathu adlala indima enkulu kumuntu ngesikhathi senkonzo yasekamelweni. Ungoti wezempilo nezobudlelwane uDkt Vuyolwethu Olona Madikane osesibhedlela eNgwelezane, uthe ngesikhathi ninezinkinga ningabhekani nesithandwa sakho, yilona thuba elikahle lokwehlisa ukhwantalala.
"Noma ngabe nixabene kangakanani akungapheli usuku ningabhekani. Ukuxhumana nokwazana kangcono kubalulekile ukuze noma ngabe niqala ucansi kube lula ukungacabangi ngezinkinga zenu. Ngesikhathi niqala ucansi, kunamahormone azothinteka njengeDopamine ehambisana nemicabango yomuntu emqondweni bese yehlisa ulaka. Yingakho izithandani eziningi zikuthola kulula ukuxazulula izinkinga nokubonisana kahle uma zike zaqala ngokwenza ucansi," kusho uDkt Madikane.
Yize kanjalo uDkt Madikane uthe ngeke nocansi lwanela noma lwawenza kahle umsebenzi uma abantu abathandanayo bevele bengasafuni ukuba ndawonye ngoba imizwa yothando nocansi yakhiwa yizinto eziningi.
"Akukho okungenza ucansi niluthakasele noma nehlise ngalo ulaka uma vele ningasahambisani ngokwemizwa. Yingakho kumele umfunde kahle umuntu wakho umazisise ukuze kuzoba lula ukubona noma sekunezinto ezingaba nezihibe ekamelweni. Uthando lwakhiwa imizwa nezinto eziningi ezahlukene njengokuxhumana ngendlela, ukwazana nenhlonipho. Uma kufika lapho isithandwa sakho siveza ukuthi noma singathanda ukuya ocansini kodwa akuvumi, kwamukele bese nixoxa ngakho kahle ukuthola umsuka," kusho uDkt Madikane.
Ukuqula amacala ngesinye isikhathi, hhayi ngoba seniyolala, ukholwa wukuthi kuyawenza umehluko kwabathandanayo. Uthi kubalulekile ukuthi umbhede nekamelo kube yindawo ekhethekile yothando nokuzithokozisa kwabaganene noma abathandanayo.